yKey yeMac - # 1 iNkqubo yokuZenzekelayo yeZenzo eziphindaphindiweyo | Plum emangalisayo
yKey yeMac - # 1 iNkqubo yokuZenzekelayo yeZenzo eziphindwayo
Asanda: 12 / 29 / 20
Iyafuna: IMac 10.9-11.1
yKey Mac App -Ukuzenzekelayo kokuPhinda phinda iZenzo kwiMac OS. Zenzekelayo ukonga ixesha.
Susa umsebenzi ongenangqondo! Yenza amanyathelo aphindaphindiweyo kwi-Mac. Naluphi na ulandelelwano lwezenzo (cofa, cofa, thayipha, tsala, vula, vala, iiapile, njl. Yonga ixesha, uchwetheze kunye namakhulu konqakrazo mihla le. Gwema i-carpal tunnel. Yenza okuncinci kwaye ufeze ngakumbi. Isikhokelo ngu UAdam Engst.
Zikhulule kwibhola nakwikhonkco lokuphindaphinda. Sebenza ngobukrelekrele, phelisa ukubulaleka nomsebenzi wokungxola, ungabi likhoboka kwakhona.
"Eyona software ndiyithandayo ye-Mac yiYKey." - Uphononongo nguDavid Pogue, ENew York Times
yKey yeMac - # 1 iNkqubo yokuZenzekelayo yeZenzo eziLuphindiweyo ubuninzi
Uphengululo kunye neRave
UAdam C. Engst ngumbhali wencwadi ethi "Thatha ulawulo lweYKey". Incwadana yakhe yesikhokelo ikunceda ufake i-yKey kwaye ibonelele inyathelo ngenyathelo lokusebenzisa isifundo kule software ibalulekileyo yeMac.
UAdam uqalise incwadana yeTidBits kwaye ubhale iincwadi ezininzi zobuchwephesha, kubandakanya nothintelo lwe-Intanethi ye-Starter Kit ethengiswa kakhulu, kunye namanqaku amaninzi emagazini.
Ngomhla ka-Matshi 2013 iTutorial "Sebenzisa i-Ableton Live kunye neYKey"
UFran Cotton's kwi-tutorial enzulu ibonisa ukuba kutheni i-yKey ibalulekile ekusebenziseni i-Ableton Live 9. Oku kubalulekile ukuba uyasebenza kwaye uchitha ixesha elininzi ngesandi. Kuquka isaphulelo seYKey. Ngakumbi i-Ableton Live kunye neendlela zeYKey Apha.
Isifundo sikaBen Waldie, Peach Pit Press
Isifundo sikaBen Waldie sisingeniso esikhulu kuYKey njenge-automation / software enkulu.
Uphononongo nguDavid Pogue, kwiNew York Times
UDavid Pogue uxoxa ngesoftware ezenzekelayo / ye-macro kwaye kwividiyo yakhe evekweyo uthi yKey yeyona ayithandayo.
Uphengululo lweMac-Guild.org lunika i-yKey 4.5 kwezi-5 zeempuku
“Oko ndaqala ukusebenzisa yKey, le gem indigcinele ukuya kwiyure ngeveki kusetyenziswa iindlela ezimfutshane. Ngokubanzi, ndiyifumene yKey inokuthenjwa kwaye kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Kwabo bafuna isisombululo esinexabiso lokudala iindlela ezimfutshane kwiMac OS X, ndincoma kakhulu ukuba ujonge yKey. -UJames Richvalsky
Sebenza kunye Isitshixo enika ukufikelela ngokukhawuleza kuzo zonke hotkeys zakho.
Ngaba ulikhoboka lekhompyuter yakho?
Siyazithanda iikhompyuter zethu, kodwa sonke siqhelene nokudinwa kwemisebenzi ephindaphindwayo. Siyazi ukuba iikhompyuter zikwazi ukujongana nokuphindaphinda, kodwa akubangakho ndlela ilula, kude kube ngoku ukuziqokelela nokuzidlulisela kwikhompyuter ukuba zenze. Ngoku, ngethamsanqa kwi-Mac kukho yKey. Zikhulule kwibhola nakwikhonkco lokuphindaphinda. Lawula ikhompyuter yakho, ungaphindi ube likhoboka, sebenzisa yKey into ezenzekelayo ye-mac.
Umzekelo olula wokuba yKey ingakongela ixesha!
Yithi uvula iSafari yonke imihla kwaye uye kwiiwebhusayithi ezisi-8 kwaye ukope umbhalo othile owuthumela i-imeyile komnye umntu. Endaweni yokuba wenze lo msebenzi okufanayo yonke imihla kangange-15 yeemizuzu uthayipha kwaye ucofa kwaye uvula kwaye uvala izicelo zenze nge-yKey nge-hotkey enye okanye into yemenyu kwaye uyenze isebenze ngasemva ngelixa usenza omnye umsebenzi okanye uphethe ikomityi yeti. Ngokukrakra, kutheni unikela ngobomi bakho kwizenzo eziphindaphindayo zokuphindaphinda xa ikhompyuter yakho ikwenzela.
Yenza kancinci kwaye ufeze ngakumbi nge-yKey.
yKey yongeza into ebalulekileyo kodwa engekhoyo kwiMac OS X, into ezisebenzelayo! yKey iya kukugcina kunye nenkampani yakho ixesha elixabisekileyo kunye namandla. Konke oku malunga nokusebenza kakuhle, sikubiza oku "kukwenza kancinci kwaye ufeze okungaphezulu." yKey inokuguqula isenzo esiphindaphindayo esinokuthi siqulathe amawakawaka okucofa imouse (kwizicelo ezahlukeneyo, kwiimenyu nakwiibhokisi zencoko yababini) kunye namaphepha okuchwetheza kwiindlela ezimfutshane ezinokumiliselwa nangaliphi na ixesha ukwenza isenzo esifanayo ngokucinezela iqhosha elilula . Funda ngakumbi ngeendlela ezimfutshane kwicandelo lethu lesishwankathelo.
Isishwankathelo kunye nokuZenzekelayo
yKey sisixhobo esizisebenzelayo, inkqubo eyenza iindlela ezimfutshane ukufezekisa imisebenzi ephindaphindwayo. Eyona nto ibalulekileyo, indlela emfutshane yKey yinkqubo encinci ngokwayo, kodwa awudingi kwazi into yokuqala malunga nenkqubo yokwenza indlela emfutshane yKey. Into ekufuneka uyenzile kukudibanisa izinto ezintathu ezifunekayo zendlela emfutshane: Umyalelo omnye okanye engaphezulu enika indlela emfutshane ukusebenza kwayo, imeko ebaleka kuyo, kunye nesiqalisi esichaza ukuba indlela emfutshane yenziwe njani.
Indlela emfutshane yenziwa ngamacandelo ama-3:
Umyalelo isenzo, okanye uthotho lwezinto ofuna ukuzenza. Umzekelo womyalelo: Vula iFotohop kwaye uqale uxwebhu olutsha. yKey inokuvula imenyu kwaye ukhethe izinto zemenyu. Inokubamba kwaye isebenze izikripthi ze-Apple kwi-palet. Yenza intshukumo ye mouse ngokuthe nqakraza kwindawo yesikrini kuhlelo lokusebenza. Ingasebenza kwi
Umxholo uvela apho indlela imfutshane inokuthi isebenze khona. Eyona nto ixhaphakileyo kumxholo isetiwe kwindalo iphela ukuze isebenze ngaphandle kokufaka isicelo. Nangona kunjalo unqwenela ukuseta i-hotkey ukuze isetyenziswe kuphela kwiFotohop, kule meko imeko iya kusetwa kwiFotohop. yKey isebenza ngaphakathi naphakathi kwayo yonke imisebenzi.
Umqalisi yeyona nto isebenzayo indlela yakho emfutshane. Eyona ixhaphakileyo yinto eshushu kunye nomsitho wexesha lomhla. Umzekelo wazisa i-Safari ngokucinezela ukhetho okanye ulayishe ngo-8: 00 rhoqo kusasa.
Izicelo kunye namaxwebhu
Sebenzisa yKey ukuxelela ikhompyuter yakho ukuba iphumeze, itshintshe, ibonise, uyeke kwaye uqalise usetyenziso lwesoftware, okanye uvule amaxwebhu athile nakwezinye izicelo ngaphandle kwesicelo somdali. Kubandakanya ukufikelela kwizicelo zamva nje kunye nokusetyenziswa okwangoku. yKey ikwazile ukulawula ezona windows kunye neemenyu zokusebenzisa.
'Ukhetho' + 'g' lundisa kuGoogle kwiwindow entsha. 'Ukhetho' + 's' ilayisha iSafari okanye izisa eyona window yakutshanje ngaphambili. 'Option' + 'p' ivula iFotohop (okanye nayiphi na usetyenziso oyikhethileyo) kwaye ivule uxwebhu olutsha. Ukutshintsha phakathi kwezicelo akuzange kube lula kwaye kukhawuleze.
Uluhlu lwam lomsebenzi alupheli. Ekuqaleni kosuku kulayisha njengenxalenye yokulandelelana, kunye ne-imeyile yam, cnn.com, kunye nezinto ezi-ebay endizilandelayo. Ukujonga uluhlu lwam emini, ndicofa nje 'ukhetho' + 'shift' + 't' kwaye iza ngaphambili kwidesktop yam.
Ukwenza amaxwebhu ukufomata kunokuba nzima. Unokuba neefonti ezahlukeneyo, ubungakanani, imibala, kunye nolungelelwaniso lolungelelwaniso. Ndisebenzise i-yKey ukuseta ii-hotkeys, ezisebenza kuphela ngaphakathi kwe-MS Word, ezalatha ukufomatha kwam.
Ibhodi eqhotyoshwayo, iWindow, iNkqubo, kunye ne-UNIX
Ukukhuphela, uku-odola kunye nokongeza kwi-clipboard konke kunokwenzeka nge-yKey. yKey inokuvula iiNkqubo zoKhetho kwaye itshintshele nakwezinye iipaneli zokhetho. yKey inokuxela ikhompyuter ukuba ilala nini, iphinde iqale okanye icime. Sebenzisa amandla e-Mac OS X, yKey iyakwazi ukwenza imiyalelo ye-UNIX.
Ndisebenzisa i-yKey ukwenza i-hard drive yam ngelixa ndileleyo. Kodwa xa igqityiwe, ndiyathanda ukuba ikhompyuter yam ilale ukuze ndonge umbane. yKey inokuyinyamekela yonke le nto, sisiqwengana esinjani esiguqukayo sesoftware!
Kuhle kakhulu ukubona ukuba iiwebhusayithi zam zijonga njani kuseto lweekhompyuter ezahlukeneyo kunye nezikrini. Ukuhlengahlengisa inkqubo yendlela okhetha ngayo qho xa ndisenza oku kuya kuba nzima. Ngoku ndiyakwazi ukwenza oku ukutshintshela ngasemva nangokunqakraza kanye.
Ikhibhodi, iMouse, iMenyu, kunye nePhalethi
yKey inokulinganisa zombini izehlo eziphambili kunye neminyhadala yemouse, oko kukuthi yKey inokulawula ikhompyutha ngokungathi kukho umntu osebenzisa ikhibhodi kunye negundwane. Imiyalelo yebhodi yezitshixo ikwabandakanya nokukwazi ukuchwetheza umhla, chwetheza imixholo yebhodi eqhotyoshwayo okanye imixholo yefayile.
KwiFlash MX akukho hotkey yokufaka isakhelo kungqimba. Ngokuchasene nokusebenzisa imouse ngalo lonke ixesha ukwenza oku, ndisebenzise iYey ukuze ikhethe 'ukufaka isakhelo' kwimenyu xa ndicofa 'ukhetho' + 'shift' + 'f'. Ndibeka umxholo ukuze usebenze kuphela ngaphakathi kweFlash, ukuze eli qhosha lifumaneke kolunye usetyenziso.
Ukulayisha iifayile kwiserver yam kunokuba yindinisa, ngakumbi xa ndisebenzisa i-PHP, efuna ukuba ndihlele rhoqo, ndilayishe kwaye ndivavanye. Isoftware ekhuselekileyo ye-FTP endiyisebenzisayo ifuna ukuba nditsale iifayile kumfumani wam ukuze ndizilayishe. Ndibeke indlela emfutshane kwiYKey ukuze xa ndibetha 'ctrl' + 'shift' + 'u', ikhompyuter yam ivula isifumani kunye nomxhasi wam we-ftp, emva koko ilingise intshukumo yemouse efunekayo ukucwangcisa iifayile ngokomhla kwaye urhuqe iifayile kumxhasi wam we-ftp ukuze zilayishwe.
yKey isebenza ngayo yonke i-USB Hardware edweliswe ngezantsi
Uyilo lwe Contour
i icons zilungiswe
i Izitshixo zeqhosha
i Iqhosha leMedia
i Opti yeNet
I-Swann Opti Glo
Ikhibhodi ye-Ultra Slip
I-Intanethi, iSkripthi, kunye nesandi
yKey ikwazile ukuvula iiAdresi zeWebhu, Yenza ii-imeyile ezintsha, ikhefu, Display hierarchy yesikhundla kwaye ubonise iifayile ngaphakathi kuMfumani, udlale izandi, kwaye wenze iiApplescriptts okanye yona iqhutywa ngamaApplescriptts. Yenza iiplette ezinokuba naphi na kwindawo yakho yokubeka esweni ngamaqhosha akuvumela ukuba uqhube iincwadi ze-Apple ngokucinezela iqhosha.
Ukugcina umkhondo wabakhuphisana, iindaba zeshishini, kunye neinjini zokukhangela zibalulekile kwinkampani yethu. Ngale nto ndisebenzisa izilumkiso zikaGoogle, isixhobo esimangalisayo ngokwaso. Kodwa eyona nto imangalisa nangakumbi kukuba ndenze i-yKey yokushicilela ngokuzenzekelayo isilumkiso ngasinye esifanelekileyo seGoogle kuwo onke amaqabane ethu. Oko bendikusebenzisa iyure ngemini ndisenza, ngoku kwenziwa konke kukodwa.
Ndisebenzise i-yKey ukundazisa malunga nesandi esahlukileyo ngokuhambelana nemisebenzi eyenziwayo. Ukuba ndinenkomfa ye-iChat ngentsimbi yeshumi elinambini kwikhalenda yam, ke i-yKey iyakudlala isandi sexilongo, ivule iChat, kwaye indidibanise nabaphathi bam.
IMic-Guild.org inika i-yKey 4.5 kwezi-5 zeempuku
Ukusukela oko bendiqala ukusebenzisa i-yKey, le gem indisindise ixesha elingangeyure ngeveki isebenzisa iindlela ezimfutshane. Lilonke, ndiyifumene i-yKey inokuthenjwa kwaye kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Kulabo bafuna isisombululo esinexabiso eliphantsi sokwenza iindlela ezimfutshane kwiMac OS X, ndincoma kakhulu ukujonga i-yKey.
- UJames Richvalsky Funda lonke uphononongo
UMichael Hyatt-uBukhokeli baMazwe ngaMazwe nge-7/5/11 Uchaza ukusebenzisa kwakhe iYKey ukukhulisa imveliso.
Oko Kuthethwa ngabasebenzisi Bethu
"Ngaphandle kwesoftware yakho imihla yam yokuphendula imibuzo efanayo engapheliyo iya kuba yinto ethandekayo-Enkosi ngokundikhulula kwimisebenzi ephindayo"
UBrent Hohlweg, Amadoda kwii-Kilts
“Okokuqala, ndingathanda ukuthatha eli thuba nditsho ukuba i-IMHO imveliso yakho yeyona nto iluncedo ekuveliseni i-OS X endithe ndadibana nayo ukuza kuthi ga ngoku. Unxibelelwano kunye nokufikelela kwiimpawu zilula kwaye zenziwe kakuhle kangangokuba kunyaka okanye bendikhe ndazisebenzisa bendinaso isidingo sokuvula iifayile zoncedo ukufeza umsebenzi owufunayo. Isifundo kunye nesishwankathelo esiveliswe kutsha nje zilifanele ixesha lokubaleka kwaye sisebenze njengomzekelo obalaseleyo wobuchule kunye namandla e-yKey. Njengomphathi wenkqubo kunye noMvelisi weFayileMaker ndisebenzisa yKey kuwo onke amacandelo omsebenzi wam, ukusuka ekuhambeni ngokulula nangokulinganisa iiwindows kwizindlela ezimfutshane kwimenyu kunye nokufaka isicatshulwa esiphindaphindayo kunye nokusebenzisa iiapile ukusuka kwikhibhodi. Okwangoku ndinendlela ezimfutshane ezingaphezulu kwama-50 ezimfutshane kwiseti yam yendalo iphela kwaye enye ingu-40 okanye ngaphezulu isasazekile phakathi kwesiqingatha seseti yesicelo esithile. Ukudibanisa oku kundisindisa amakhulu emivumbo ephambili kunye nokucofa imouse iyure. Ngokudibeneyo neLaunchBar, yKey yenye yezi zinto zimbini KUFUNEKA ZIBE NONcedo endizisebenzisa amaxesha amaninzi ngeyure yonke imihla. ”
"Eli liqhosha elidala le-Youpi, elininzi * lwezinto ezintsha. Intle kakhulu! Ngoku ibaleka ngokulula amaQuicKeys. "
USherman Wilcox, iSebe lezeLwimi, kwiDyunivesithi yaseNew Mexico
“Sisebenzisa iYKey kumboniso wemyuziyam kwiMyuziyam yaseBoston yaBantwana; Yipaneli enkulu efana neBoston's Symphony Hall kunye nevidiyo yeBoston Pops kuyo. Abantwana banokusebenzisa i-baton ye-elektroniki "ukuqhuba" iokhestra. Kubonakala ngathi iyabetha nabahambi bemyuziyam, nto leyo eluvuyo olukhulu kuthi. Ungafunda malunga nayo ngokweenkcukacha ukuba ukhathalele kwi-reretheconductor.com ”
UTeresa Marrin Nakra, UMlawuli wezoBugcisa, uMculo wokuntywila
Le yinkqubo intle! Kuyandongela iiyure neeyure zomsebenzi. Ndihlala ndicinga ngezinto ezintsha ezinokwenza ngayo. ”
UJames Torck, uMqambi kunye noMyili weSandi
“Enkosi ngenkxaso eqhubekayo kunye nokukhutshwa okutsha kwe-yKey okuqhubeka nokuba ngcono - bendihlala ndisebenzisa iiQuickeys kwiminyaka eyadlulayo kwaye ndonwabile ngesigqibo sam sokutshintshela kuYKey - inika yonke into endiyifunayo ngeqhezu leendleko - qhubeleka nomsebenzi omhle!"
“Ndisebenzise i-KeyQuencer iminyaka kwi-Mac. Xa nditshintshela kwi-OS X, kwakungekho nguqulo ye-OS X yayo, ndaye ndazama i-Youpi Key (ngoku eyiYKey). Kukutshintsha okuhle. Iyandigcina iiyure zexesha. Ndicetyiswa kakhulu! ”
"YKey Rocks !!!! Umsebenzi omhle kakhulu!!!!"
UWilliam Jamieson, Umphathi weeProjekthi zeWebhu, iiSmart works, eOstreliya
“Bendivavanya i-beta yKey malunga neveki ngoku. Ndiqaphele ukuba ibithunyelwe kwi-VersionTracker namhlanje kwaye ndiqaphele nokuba khange uyikhankanye "ngaphambili yayisisitshixo se-Youpi". Kubalulekile ukuba wonke umntu azi ukuba u-Youpi Key ngoku uyi-key kuba unabalandeli abaninzi be-Youpi Key! ”
UPaul Wharf, uNgcali weTekhnoloji yeWebhu, iKholeji yaseMount Holyoke
"Emva kweminyaka emininzi, ndincama iiQuicKeys ngento elula esebenzayo."
“Enjani yona inkqubo entle. Ndifumana i-wallet yam njengoko ndithetha.
"Enkosi ngale app iluncedo kakhulu, enyusa imveliso."
U-Eric Le Carpentier
“Molweni bafo, Nenze kakuhle kuhlobo olutsha lwe-Youpi Key (yKey). Kumnandi ukuba ngoku yindawo yokukhetha. Ludibaniso oluhle. ”
Enkosi ngokusebenza nzima ukwenza le nto ibe sisixhobo esihle. ”
“Enkosi ngokuhlaziya i-YoupiKey / yKey. Ngokukhawuleza iba yenye yezona zinto zisetyenziswa rhoqo. Enkosi ngokudibanisa ukufihla isicelo sangaphambili! Ngoku ndingasifihla nasiphi na isicelo esineqhosha elifanayo, nokuba siseClassic. ”
Kukho ukuphononongwa kwakhona kwe-yKey kwi-VersionTracker.com
Iinkwenkwezi ezi-4.5 kunye nee-78,500 XNUMX ezikhutshelweyo
-Idityaniswe kwi-M1 Mac kunye ne-Intel kuphela. I-Universal iya kuza kwikamva
-Kongezwe 'i-bugfix / i-DarkModeContrastFixes'
-Lungisa ibar yesixhobo emhlophe kwimowudi emnyama kwiscreen esikhethiweyo
-Lungisa ukungafani kwemowudi emnyama ekungeneni kokubhaliweyo kwe-AppleScript ngokunyanzela imvelaphi emthubi yomthombo we-AppleScript sisimbo esenziwe ngentambo ngenkqubo, kunye nokuvula i-app ka-Apple yomhleli weskripthi kwimowudi emnyama ibonisa umbono wokuhlela kunye nemvelaphi yokukhanya.
-Lungisa imowudi emnyama yokubhaliweyo okumnyama kwimvelaphi emnyama kwibhodi eqhotyoshwayo, umyalelo kunye nabahleli beendlela ezimfutshane ze-URL
-Susa imigca enqamlezileyo yegridi kwimboniselo zetafile. Ezi zikhangeleka zixinene kwimowudi emnyama, kwaye nakwimodi yokukhanya ayinabunzulu ngemibala eyahlukeneyo yomqolo.
-Lungisa ukuqhekeka okunokubakho ngexesha lokuqalisa ukuba iimvume ze-HID azikabikho
-Uvavanyo oluphambili lwewindows yesixhobo se icon kwiindlela ezimnyama ezingafaniyo Buyisela oovimba bemifanekiso yakudala ubukhulu becala ngee icon zenkqubo yeAppKit. Ngaphandle koku "kukuphinda kabini" okungenayo i-icon yenkqubo.
-Lungisa imowudi emnyama yokubhaliweyo okumnyama ngasemva kubahleli beparam
-Lungisa imowudi emnyama imowudi emhlophe kwimvelaphi emhlophe kumhleli onqumlayo Inkcazo yokuphindaphinda yayisebenzisa umbala wesiko kunombala wenkqubo.
-Lungisa indlela emnyama yokubhaliweyo okumnyama kwimvelaphi emnyama kumhleli weendlela ezimfutshane
-Misa iGit ekufuneni ukulandela umkhondo owenziwe ngokwasekhaya, iifayile ezizodwa zomsebenzisi
-Susa uhlaziyo oluHlaziyiweyo oluHlaziyiweyo loHlaziyo lokuHlolaUpdates: yenzelwe kuphela ukuba isetyenziselwe uhlaziyo olucacileyo olucelwe ngumsebenzisi, hayi uhlaziyo ngokubanzi lwenkqubo. Oku kuthetha ukuba 'jonga uhlaziyo' akwenzeki kwisiqalo kwaye ucaphukise wonke umntu.
* yKey ngoku inikezela ngokuzihambisa ngokwayo kwifolda yeZicelo xa yayifakwe kuqala.
* Ukuqalisa kokuqala ngoku kuphuculwe ukuze kuvunyelwe imvume ye-macOS.
* Ukuphuculwa kweemboniselo kuboniswe ukuqala kokusebenza yKey.
* Ukulungiswa kweebugs kuphinde kuvulwe xa ungena.
* Isicelo: Umhleli weYKey ngoku uzazisa ngokuzenzekelayo kwiNjini yeYKey ukuba ngaba injini ayisebenzi.
* Ukuhlaziya uluhlu oluceliweyo lweemvume zeenguqulelo zeMacOS zamva nje.
* Lungisa ibug ngokubhalisa nge-URL.
* Yenza inkqubela phambili yezaziso zesaziso.
* Lungisa ibug xa usandisa iphaneli ewile.
* Imenyu yemenyu ye-yKey emiselweyo isebenza bhetele kwimodi emnyama. Kusafuneka usete iimenyu zakho ukuze usebenzise i "Njengendlela emnyama itemplate" ukhetho.
* Jonga uhlaziyo ngoku lusebenza ukukhuphela kunye nokufaka usetyenziso.
* Idityaniswe ne-xcode yakutshanje ye-10.3
* Yenziwe ngesixhobo esikhuselekileyo sokhuseleko lweapile
[lungisa] Lungisa ingozi embi eyenzeka kwiinguqulelo zeMacOS zamva xa iplagi yKey izama ukubonisa umyalezo.
[mod] Ukuphucula ukubonakala kwemenyu kwimowudi emnyama. Iimpawu zeemenyu zithathwa njengemifanekiso yetemplate, esebenza kwimodi emnyama. Ukuba unomfanekiso wombala opheleleyo, kufuneka ungakhethi i-template emnyama ye-template ukhetho lwelo icon kwi-YKey Mhleli.
[mod] Yenza i-URL ye-Sparkle yokuhlaziya indawo kwindawo esemgangathweni kwindawo yePlum emangalisayo.
[lungisa] Yongeza iinguqulelo ezithile ezingekhoyo.
[lungisa] Lungisa ii-animation zeewindow eziqalisiweyo / ezigqitywe kwindawo engeyiyo.
[lungisa] Thintela ingozi xa ezinye izehlo zekhalenda zisenzeka (zihlala zibonakala njengengozi xa uvuka okanye ukwaphuka xa kuvulwe okwethutyana).
[lungisa] Ukubuyisela ubungakanani kwakhona imiyalelo yewindows ngoku sebenza kwakhona kwiinguqulelo zeMacOS zamva nje.
[lungisa] Lungisa ezinye zeengxaki zomfanekiso kuMhleli we-yKey, ngakumbi apho ezinye iicons zaphoswayo.
[mod] Igama elitsha: iKey ngoku yKey!
[mod] Isusile isidingo sokusebenza njengomsebenzisi womlawuli, ngokuhambelana neendlela zokhuseleko zanamhlanje.
[mod] Uphuculo lweendlela yKey eziphatha ngayo amaqhosha asezantsi efestile (njengokusondela, ukunciphisa, ukusondeza / isikrini esipheleleyo).
[mod] Coca izinto zobhaliso emva kokubhalisa.
[mod] yKey uqwalaselo lwayo ngoku lugciniwe kwaye luyalayisha kwindawo yomgangatho omiselweyo ngakumbi. Ukucwangciswa kwangaphambili kudlulisiwe xa kuqalwa le nguqulo intsha.
[mod] Ukhetho ekwabelwana ngalo phakathi komhleli kunye ne-yKey injini ngoku zilungelelaniswe ngcono.
[mod] Ukuphucuka okuninzi kokuphuculwa kwangaphakathi kunye nokuphuculwa.
[mod] Ukuhlaziywa kwekhowudi yokusayina kwiimfuno zamva nje ze-Apple.
[entsha] Isicelo sokufaka njengesixhobo sokungena ngoku sinokucinezelwa ukuba awufuni
ukwenza oku (usenako ukutshintsha ingqondo yakho ngokuthanda).
[mod] Ususe ezinye iikhonkco zewebhu stale (utshintsho lwamaxesha kunye nakwiwebhu).
[mod] Ishenxise "ulungelelwaniso kubo bonke abasebenzisi" inqaku. Kwakhona, ukuvula inkqubo yokwabelana ngolwazi lolungelelwaniso phakathi kwabasebenzisi abaninzi ayiseyiyo indlela eyamkelekileyo kwilizwe langoku lokwazi ukhuseleko. Ukucwangciswa kusenokwabiwa ngokuthumela ngaphandle nangaphandle, kodwa sonke sithanda ukwenza ubume bocwangciso lwethu, akunjalo?
[mod] Isuswe inkxaso yomhleli we-auto-wake emva kokulala. I-OS X ayixhasanga oku ukusukela kwi-OS X 10.5.
[mod] Isusile inkxaso yokuguqula ukhetho lwe-iKey v1 okoko v1 yathathelwa indawo kwishumi leminyaka eyadlulayo.
[mod] Isusile inkxaso ye .Mackup yokugcina inkonzo ngokukhawuleza "ekukhupheni ngokukhawuleza" ukusukela iApple yathatha umhlala phantsi .Mac.
[New] Isicelo Esisayiniweyo sonjiniyela, ithala leencwadi kunye nenkqubo-sikhokelo.
[Ukuhlaziywa] Coca isiseko sekhowudi (uhlaziyiweyo unokufumana iminxeba yelifa kunye nemiyalezo engaphantsi yelog) kwaye ususe ikhowudi engasetyenziswanga / yakudala.
[Ukuhlaziywa] Ngoku ngokukhawuleza qalisa ukunika i-Eyey ukufikelela kuKhuseleko -> Imfihlo -> Ukufikelela ukuyivumela ukuba ilawule ikhomputha yakho. -Izihlaziyo ezingakumbi kunye neempawu ezintsha ezizayo. -Ubulela bonke abasebenzisi ngengxelo.
[Yongeza] -inkxaso kunye nokudityaniswa kunye neFCCue (ergonis.com)
[Yongeza] -ngena ngemvume ukuba iqhoshaCue alisebenzi.
[Ukulungisa] -kungqinela ii-bugs xa ulungiselela ukukhutshwa okukhulu kwixesha elizayo.
[Ihlaziywe]-Indawo yefayile yomgqomo ukusuka kwisoftware yescript ukuya kwisiza se-plum.
[lungisa] isitshixo somhleli eshushu asibonisanga kakuhle kwi-10.5.8 xa sisebenza nge-64bit.
[lungisa] uhlengahlengiso lwendlela entsha yokuziphatha ye-mac ukuze i-32bit isebenze ngokuchanekileyo nangokuzenzekelayo kwangaphambi kwe-10.6 kunye ne-64bit ye-10.6 nangaphezulu nayo isebenza ngokuchanekileyo.
[mod] Ibug: Yekani enye - Yabulala injini ye -eyey. Utshintsho kwindlela yokuziphatha: inqaku kuphela kwendlela yokuyeka i-injini ye-iKey kukushiya ngokucacileyo. Ukuyeka Okunye ukuyeka ukusetyenziswa: Yizise ngaphambili kunye neKuwushiya phambili, okanye uyeke iKey.ap. Ukuba ufuna ukwenza ukuba ukulandelwa kukhetho lokuyekelayo kwi-plugin Ukuvumela uhlobo lwe-terminal: defaults bhala com.scripttsoftware.ikey debugTracePluginEng 1 Ukucima uhlobo lwesiphelo: ukungathembeki bhala com.scripttsoftware.ikey debugTracePluginEng 0
[mod] Ukongezwa kwe-USB Ukufumana inkxaso eyandisiweyo ye-XKey entsha (isixhobo esithile se-usb esinezitshixo ezininzi, iziqhulo zovuyo, isiqhulo kunye nesixhobo esitshixwayo). Iinkcukacha zabasebenzisi be-xkey entsha kwaye abadinga oku: ukwenza ukuba umgca wokuyalela ungene: ukungagqibeki bhala com.scripttsoftware.ikeyeditor debugTraceUSB 1 Emva koko thumela iilog zoMhleli weKey ukuxhasa.
[lungisa] izicelo zamvanje kunye namaxwebhu ayasebenza
[mod] isebenza nabahloli abaninzi. inokuhambisa iifestile kwindawo engalunganga. iimonitor ngasekhohlo zithathwa njengezingalunganga.
[mod] fakela ayisasivuli incwadana yokuvula ekugqibeleni kofakelo.
[lungisa] inguqulelo 2.4.3 ayivulanga abasebenzisi abatsha. Lo mbandela mtsha ukhetha ukusonjululwa.
[mod] yatshintsha imenyu yoncedo lomhleli iye kwi: IWebsite yeWebhu ...
[mod] umyalezo osetyenzisiweyo ungene: yatsho ukuba iiActionActions: qala kwakhona Impumelelo: 0 I-fax: x
[lungisa] Upelo olusisigxina kunye nengxelo ephuculweyo yezitshixo zobhaliso ezingaphumelelanga.
[mod] fakela ngoku kukuvumela ukuba ukhethe indawo yangokwakho.
[mod] iseti yencwadana yokuvumela umda osisigxina kunye nobubanzi obuboniswayo
[yongeza] ususiwe kwi-scriptsoftware.com yakudala ukuya kwiwebhusayithi entsha, igama elitsha kwisizinda esitsha> iplamu iyamangalisa
[mod] isuswe Gunyazisa ukhetho kwimenyu yeFayile yomhleli ngezizathu zokhuseleko. Qaphela: oku kuchaphazela ukuvuka kukhetho lokulala kuphela ukuba unika amandla isixhobo esifikelelekayo. Umyalelo wokulala ngaphandle kokuphinda ukhethe usebenza.
[mod] Umyalelo wenkqubo-qalisa / yeka i-classic ngoku ikhubazekile kwi-64 bit kwi-10.6
[mod] Ukukhetha akukhange ugcine ukuba ubambe iqhosha elibomvu kufutshane- liyikhubaze
[mod] yamkelekile isikrini inekhonkco kwiPDF kwi-iKey.app kufuneka ihlaziye kwaye isuse iPDF
[mod] impendulo ye-imeyile ngoku ingxelo "Ndiqhuba iKey 2.4.0 phantsi kweMac OS X 10.6.2 (Intel 64)."
[mod] Umsebenzisi ongezelelweyo kwisakhelo sokusebenza "IKActionDebug" ukulungiselela ukuhlelwa kwamanyathelo okungena.
[lungisa] Ayikwazanga ukufumana umfanekiso obizwa ngokuba 'sisikhombisi'.
[yongeza] into C 2.0 ukubala ngokukhawuleza okusetyenziselwa ukukhawulezisa izinto
[yongeza] Ukhetho olukhethiweyo kwifolda yeMiyalelo yeFolder ..
[yongeza] Imenyu emiselweyo ye-Ikey entsha
[lungisa] ulawulo olukumgangatho ophezulu eluvalelweyo.
[lungisa] Ukulungisa: iKey Iconso lomhleli weCustomer *** ISILUMKISO: Indlela yokusetaDrawsGrid: kwiklasi ye-StripedTableView iyekwe. Iyakususwa kukhutshwe kwixa elizayo kwaye ayisafanele isasetyenziswa.
[lungisa] Fixix: Umyalelo wenethiwekhi wokukhetha iindawo kwi-10.6.x
[mod] Uhlaziyo lweseva yeNtaba yokucoca umba, ngoku isebenzisa i-UTF8 kwinkxaso yangaphakathi.
[mod] iinguqulelo zezixhobo ezihlaziyiweyo zeThuluzi lokuSebenza kwiTheminali kunye nokuHlela.
[mod] umyalelo ongavunyelwanga ngoku ubuyisela impazamo yokubuya komyalelo #
[yongeza] Ingcebiso yeziXhobo ezongeziweyo kwimenyu ukuba iboniswe kuphela icon.
[lungisa] isandi esimiselweyo phezulu, ezantsi kunye nesimumu. Ngoku isebenza ngaphandle kodidi lwebhodi yezitshixo.
[yongeza] Yongeza i-Sandi-> Umyaleli weMax. Cwangcisa ivolumu kwixabiso leMax.
[mod] unix-run ifayile- hlela ayikuxeleli ukuba nguwuphi umhleli
[mod] ngokususa okanye ukongeza umfanekiso / isihloko kumenyu.
[lungisa] i-bug elungelelanisiweyo yayintshukumo yesibini kwinto enye kwimenyu okanye ipallete ayinakongeza.
[mod] umyalezo osetyenzisiweyo ungene: I-runActions: ukuphinda uphumelele: 0 I-faes: 6
[Yongeza] Ngokuheleleyo i-64 bit ukubandakanya zonke iimodyuli xa usebenzisa u-10.6. Oku kuthetha ukuba uza kuqhuba ngokukhawuleza kwaye usebenzise imemori encinci.
[Mod] Ikhutshwe ikhowudi eyonakalisiweyo.
[Yongeza] Imodyuli entsha ukulawula i-iClock ngokulula.
[Mod] uxwebhu lwakutshanje kunye notshintsho lwakutshanje oluvulekileyo lwale nguqulo (iya kubonisa kodwa ikhubazekile)
[Imodyuli] le kunye nexesha elizayo ziyaxhasa i-10.5 kunye ne-10.6 kodwa azisekho i-10.4
Cofa apha kwisikhokelo se-Intanethi.
Cofa apha ukuba ufuna i-PDF epheleleyo yencwadana yemigaqo.
2.8.0 IMac OS 10.9 - 10.15
2.7.0 IMac OS 10.7 - 10.14
2.5.2-Ifuna> iMac OS 10.6 kunye <Mac OS 10.10
2.3.4-Ifuna <Mac OS 10.5
yKey ikhankanywa ngo-00: 03: 5 kule podcast inkulu kunye noDave Hamilton eMacObserver.
UFran Cotton's kwi-tutorial enzulu ibonisa ukuba kutheni i-yKey ibalulekile ekusebenziseni i-Ableton Live 9. Oku kubalulekile ukuba uyasebenza kwaye uchitha ixesha elininzi ngesandi. Kubandakanya isaphulelo seYKey. Ngakumbi i-Ableton Live kunye neendlela zeYKey Apha.
Insiza enkulu kunye neetoni zokukhetha. Uzinzile naye. Emva kokushiya i-Quickkeys kwiminyaka embalwa edlulileyo, ndonwabe kakhulu yile. - I-Beige kwi-MacUpdate
Ndisebenza noFinale kakhulu, inkqubo enamandla kakhulu kodwa entsonkothileyo yokuseta kunye nokwenza umculo wamaphepha. Ukuba ungumdlali webhodibhodi-endingeyiyo- ungadlala amanqaku kumanqaku ngekhibhodi emidi. Kodwa abanye bethu kufuneka bafake amanqaku ngesandla nokuba kukwiiplette okanye ikhibhodi yekhompyuter. Ngoku ukuba ungena kwii-chords ezinamanqaku okwenyani- ngokuchasene neesimboli ze-chord -yinkqubo enesidima kakhulu efuna amaqhosha amaninzi. Kodwa ngeYKey ngumoya ovuthuzayo. Yenza nje i-macro yakho, ucofe iqhosha, kwaye ubukele amanqaku avela ngathi ngomlingo! yKey inyuse kakhulu imveliso yam yokugqibela. Kulula ukuyisebenzisa, kwaye okwangoku, ndiyazibuza ukuba bendihlala njani ngaphandle kwayo. - I-Pyper kwiMacUpdate
Ndizamile i-Keyboard Maestro, iSpark kunye neQuicKeys kodwa akukho namnye kubo owenze le nto kanye ndiyifunayo kanye ngendlela efanelekileyo kum. iKey iyenza. - UmbalaGravity
Kudala ndisebenzisa iKey iminyaka, ukusuka kwangoko ngaphambi kwe-UI entsha. Ndiyifumene ngokungaguquguqukiyo ingenaziphene kwaye izinzile. Nje ukuba ingqondo yakho ijikeleze i-UI, eyona nkqubo yokuseta iindlela ezimfutshane ayinzima. Ngokuchasene noko, ndiyifumene inomdla. - SimiChavel
Inkqubo eluncedo kakhulu. -Colette kwiMacUpdate
Ilizwe elisekwe kumaxabiso imo yovavanyo yenziwe ukuba ivavanywe eFrance. Kuya kufuneka wenze iimvavanyo kwimowudi yokukhangela yabucala. Bhrawuza ngasese nge Firefox, chrome kwaye safari